You are here: गृहपृष्ठ ब्लग नेपालमा बारम्बार भईरहने वर्षाजन्य विपद्
जुलाई ३१, २०२०
धर्म उप्रेती र कृति श्रेष्ठ
सन् २०२० मा वर्षाजन्य विपद्को प्रभाव कति?
यो वर्ष मनसुनको सुरुवात जून १२, २०२० देखि भएको थियो । हरेक वर्ष सामान्यतया जून १० बाट सुरु हुने भएतापनि यस वर्ष दुई दिनको फरक प¥यो । मनसुन सुरु भएको दोस्रो दिनमा नै देशको २ स्थानमा पहिरो गयो, जसले पश्चिमी नेपालको पर्वत जिल्लामा ८ जनाको ज्यान लग्यो र २ घरहरू नष्ट बनायो । वर्षासँगै बाढी र पहिरो बढ्दा जूनको दोस्रो हप्ता मै देशका धेरै जिल्लाहरू प्रभावित भई मृत्यु सङ्ख्या, सम्पत्तिको क्षति, नोक्सानी बढ्दै गयो । र मनसुनको अत्याधिक वर्षाले नेपालको अधिकांश क्षेत्र तहसनहस बनायो । उदाहरणको लागि, जुलाई ९–१० मा २४ घण्टा मै बाढी र पहिरोको कारण म्याग्दी, लमजुङ, कास्की, रुकुम (पश्चिम), जाजरकोट र गुल्मी जिल्लाका २३ जनाले ज्यान गुमाउनु प¥यो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन (जुलाई ३१, २०२०) अनुसार बाढी र पहिरोको कारण १६४ जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन् (तलको चार्ट हेर्नुहोस्) । पहिरोको कारण मृत्यु भएका मानिसको तुलनामा बाढीले पु¥याएको क्षति न्यून छ । बाढीले ३ जनाको मृत्य भएको छ भने पहिरोको कारण १६१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् र पहिरोमा ४५ जना हराईरहेका छन् ।
विगतलाई हेर्दा, सन् २०१७ मा बाढीले मात्रै १५० जनाको मृत्यु, सन् २०१८ मा बाढी र पहिरोले १०५ जना र सन् २०१९ मा ११७ जनाले ज्यान गुमाए भने ३८ जना हराई रहेका छन् (राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, २०१९) । सन् २०१५ मा भूकम्पले प्रभावित गरेका केही जिल्लाहरू बाहेक धेरैमा पहिरोले प्रभावित गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, कास्की र म्याग्दी जिल्लाहरू पहिरोले सबै भन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । प्रभावित भएका अन्य जिल्लाहरू कालीकोट, स्याङ्जा, गुल्मी, बझाङ, दार्चुला, बाजुरा र जाजरकोट पर्दछन् । धेरै गाउँ तथा बस्तीहरू विगतमा पहिरो गएका स्थानहरू वा आसपासका क्षेत्रमा अवस्थित छन् । सन् २०१५ मा गएको भूकम्पले १५ जिल्लाका भौगर्भिक अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ र त्यहाँ देखि पहिरोको कारक तत्वको रुपमा देखापरेको छ ।
किन नेपालले हरेक वर्ष दुःख व्यहोर्नु परेको हो?
जल तथा मौसमजन्य विपद्हरू मध्ये बाढी र पहिरो नेपालमा दोहोरिईरहने प्रमुख विपद्हरू हुन् । यद्यपि, पछिल्ला केही वर्षहरूमा पहिरोले धेरै मानिसको मृत्यु भएको, जीविकोपार्जनका उपायहरू र सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको छ । अधिकांश जल उत्पन्न विपद्हरू मनसुनको समय (जून–सेप्टेम्बर) मा हुने गर्छ, जुन समयमा वर्षभरीको तुलनामा ८० प्रतिशत वर्षा हुन्छ । यो वर्ष, अपेक्षा गरिएको औषत वर्षा भन्दा देशमा बढी बर्षा भयो । चित्र १ ले देशमा भएका कुल वर्षाको अवस्थालाई जनाउँछ र यसले धेरै घटनाहरूमा अपेक्षित भन्दा बढी औषत वर्षा भएको देखाउँछ ।
प्रत्येक वर्ष, देशको दक्षिणी भूभागलाई मनसुनको बाढीले सताईरहेको हुन्छ भने पहाडी जिल्लाहरूलाई पहिरोले प्रभावित गर्दछ । नेपालमा बारम्बार बाढी र पहिरो आउनुमा दुवै प्राकृतिक र मानवजन्य कृयाकलापहरू जिम्मेवार छन् । करिब ८३ प्रतिशत हिमाली भूभागमा कमजोर र संवेदनशील भौगर्भिक बनावट रहेको छ, जुन टेक्टोनिकली सक्रिय क्षेत्र अन्तर्गत पनि पर्दछन् । जब प्रत्येक वर्ष मनसुनको समयमा वर्षा हुन्छ, त्यसपछि देशका धेरैजसो स्थानमा पहिरो जाने गर्दछ । ती स्थानहरू भिरालो जमिन भएकाले हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदी, शाखा नदी र खोलानाला अत्यन्तै तिब्र गतिमा बग्छन् जसले देशका अधिकांश स्थानमा पहिरो जान बल पुगी रहेको छ । लगातार आईरहने अत्याधिक वर्षाले कमजोर भूबनोट भएको पहाडी स्थानहरूमा पहिरो जान्छ र बग्दै आएको थेग्रो वा टुटेफुटेका टुक्रा (ढुङ्गा र माटोको समिश्रण) जब बाढी भईरहेको नदीमा मिसिन्छ, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा अत्यन्तै ठूलो बाढी सिर्जना गर्छ । वर्षाको निरन्तर अवस्थामा परिवर्तन भएको र सन् २०१४ देखि अझ गम्भिर र अनियमित भएकोले ठूलो बाढी सिर्जना गर्न र पहिरो ल्याउन मद्धत गरिरहेको छ ।
यी बाहेक, जनसङ्ख्या बृद्धि हुनु, जोखिमयुक्त स्थानमा गैरकानुनी तरिकाले बसोबास गर्नु र ईञ्जिनियरिङ ज्ञान बिना नै जथाभावी रुपमा सडक निर्माण गर्नाले पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरो जाने गरेको छ । भूउपयोगको उपयुक्त अभ्यास नगण्य रुपमा भएको र प्रकोपहरू विपद्मा परिणत हुँदा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने प्रशस्त सम्पत्ति नोक्सान भएका छन् । प्रत्येक वर्ष, मनसुनको समयमा हुने वर्षाले तराईमा सिर्जना गरेको बाढी र डुबान यसका साक्षी हुन् । अधिकांश बस्तीहरू नदी छेउमा अवस्थित छन् र नदी बग्ने प्राकृतिक बाटोहरू अतिक्रमण भएका छन् । नेपालका समथर भूभागहरू साना बस्तीहरू देखि ठूला शहरहरू सम्म फैलिएको छ । केही सहरी क्षेत्र जुन योजनाबद्ध रुपले विकास भएका छन्, ती बाहेक अधिकांश ठूला बस्तीहरू मानिसको बँसाइसराईले भरिएका छन्, भारतको नजिक रहेको र बजारको अवसर छ । तर तिनीहरूले घरहरू निर्माण गर्दा जोखिमको संवेदनशीलतालाई वेवास्ता गरिरहेको पाईन्छ । प्रायः सबै नदीहरू पहाडी तथा हिमालय क्षेत्रबाट सुरु भई तराईका समथर भूभाग हुँदै बग्दछन् । जब मध्य पहाड र हिमाली भेगमा अधिक वर्षा हुन्छ, जल सतह बढ्दै जान्छ र बस्तीहरूमा प्रवेश गर्छ ।
नेपालको चुरिया क्षेत्रमा भने अवैध रुपमा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाहरू सङ्कलन भएकाले पहिरोको जोखिम बढेको छ र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा बाढी सिर्जना गर्दछ । चुरिया भावर (मध्य–पहाडी क्षेत्र जसलाई महाभारत रेञ्ज पनि भनिन्छ) क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन् हुनु, वन फँडानी हुनु र वनक्षेत्र गिरावट हुँदा पानीको पुनर्भरण प्रकृया कमजोर भएको, पानी बग्ने ठाउँ विचलित वा अवरुद्ध भएको र अव्यवस्थित सडक निर्माण भईरहेको स्थानबाट पानी बग्दा त्यसले प्रशस्त माटो र बालुवा बगाएर ल्याउँदा बाढीको मात्रा र गति बढ्दै होचो समथर जमिनमा प्रवेश गरी डुबान गर्ने र भौतिक संरचनाहरू नष्ट गर्ने गरेको छ । त्यसकारण, नदी किनार अतिक्रमण हुनु, विगत देखिको नदी बग्ने बाटो साँगुरो हुँदा नदी तथा खोला बग्ने बाटो वा ठाउँ परिवर्तन भई समथर भूभागका बस्तीहरूमा डुबान हुन्छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा निकायहरू नजोडिनु
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा कार्यरत निकायहरू जसरी लाग्नु पथ्र्यो त्यसरी जोडिन सकिरहेका छैनन् । यसले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सम्पूर्ण प्रणालीलाई कमजोर र कम संवेदनशील बनाएको छ । संघीय तहमा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । ऐनले प्राधिकरणलाई पूर्वतयारीका कार्य गर्न र देशमा विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अनुसन्धान देखि स्रोत व्यवस्थापन सहित २५ किसिमका भूमिका निर्वाह गर्न पर्याप्त अधिकार दिएको छ । तर पनि, अझ सम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित हुन सकिरहेको छैन । अन्य निकाय र संघसंस्थाहरूसँग सञ्चार प्रकृया र व्यवस्थापनको पद्धती पनि प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन । जोखिमको सूचना प्रवाह गर्न पनि अन्य निकायसँग निर्भर रहनु परिरहेको छ । जस्तैः जल तथा मौसमजन्य प्रकोपहरूको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, क्षति तथा नोक्सानी सम्बन्धी जानकारीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग निर्भर रहनुपरेको छ । प्राधिकरणलाई स्थानीय सरकार मातहतमा गठित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू र प्रदेश सरकारको मातहतमा गठित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिहरूलाई आदेश दिने वा मार्गनिर्देशिका प्रदान गर्ने जनादेश छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण साझास्थल (प्लेटफर्म) बनेको छ । यस मन्त्रालयमा वातावरण तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन शाखा पनि रहेको छ जसलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका कार्य गर्ने जनादेश दिईएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले आपत्कालीन प्रतिकार्यमा केन्द्रित कार्य गर्छ भने प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले प्रदेश स्तरमा, जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जिल्ला स्तरमा र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले स्थानीय स्तरमा केन्द्रित भई कार्य गर्छ ।
केही नगरपालिकाहरूमा, स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले काम गर्न सुरु गरेको छ भने अधिकांश पालिकाहरूमा यो स्थापना नै भएको छैन । प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र बाहेक, प्रदेश स्तरमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र स्थानीय स्तरमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । यसले के दर्शाउँछ भने हामी संस्थागत संरचनाको दृष्टिकोणमा सबल छौं । तर, तिनीहरूको कार्यशैलीमा अझ पनि प्रश्न खडा भएको छ । थप, जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग केही बेसिन कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । तर, बेसिन कार्यालयमा मात्र नभई विभागमा पनि पर्याप्त मानवस्रोत छैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य ७५३ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने, क्षमता विकास गर्ने र विपद्बाट मानिसको जीवन र जीविकोपार्जन जोगाउन जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूसँग सम्पूर्ण सामग्रीहरू हुनु आवश्यक छ र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वास्तविक समय (रियल टाईम) मा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीसँग सिधै जोडिनुपर्छ । सबै तहमा विपद् पूर्वतयारीका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई विद्यमान प्रकोपहरू र सङ्कटासन्न अवस्था बारे ज्ञान हुनुपर्छ । उहाँहरूले भौगर्भिक क्षेत्रको अध्ययनमा लगानी गर्नुपर्छ । जमिनको वर्गिकरण गरी ट्राफिक लाईट सिस्टम जस्तो गरी सिमाङ्कन गरिनुपर्छ । जस्तैः रातोले जोखिमयुक्त क्षेत्र, एम्बर (गाढा पहेंलो) ले बस्ती बस्न पनि सक्छ वा कम प्रभावित क्षेत्र र हरियोले सुरक्षित बस्तीयोग्य क्षेत्र भनेर किटान गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले समुदायलाई वर्षा अनुसार जोखिमयुक्त तह (१ घण्टामा ६० मि.मि., ३ घण्टामा ८० मि.मि., ६ घण्टामा १०० मि.मि., १२ घण्टामा १२० मि.मि. र २४ घण्टामा १४० मि.मि.सङ्कलित वर्षा) को आधारमा सचेत (अलर्ट) गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारले समेत सम्बन्धित समुदायलाई पूर्व सूचना गर्नुपर्छ र सम्भावित विपद्को अवस्थालाई हेरी स्थानान्तरणमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसले बहुप्रकोपमा आधारित जोखिम घटाउनलाई योगदान गर्नेछ । साथै, जीवन बचाउन र सम्पत्ति सामान नोक्सान हुनबाट जोगाउँछ ।
स्थानीय सरकारले अझै पनि उत्थानशीलता अभिबृद्धिका अवधारणालाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । तिनीहरू विपद् पश्चातको उद्धार र राहत कार्य मै केन्द्रित हुन्छन् । प्रकोपहरू बढ्दै जाँदा सङ्कट र प्रभाव स्तर बृद्धि हुन्छ र समुदायको क्षमता घट्छ । विपद्को प्रभावले कमजोर बन्दै सम्पूर्ण पद्धतीहरू समुदायको उत्थानशीलता भन्दा टाढा पुग्छ ।
थ्रेसोल्डमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली र सबै स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध विस्तारले श्रेणीवद्ध रुपमा एक विपद्बाट अर्को विपद् हुनमा रोक्छ र एउटा प्रकोपमा रोकावट पैदा गरी अर्को प्रकोपजन्य विपद् हुनबाट बचाउँछ । यो भन्नु गलत नहोला कि, नेपालमा सबै तहका सरकार पूर्वतयारीका उपायहरू र पूर्व अनुमानमा आधारित कार्यहरूमा लगानी गर्नुभन्दा विपद् पश्चात राहत र पुनर्लाभ मै केन्द्रित छन् । यसरी सरकारी निकाय उद्धार र पुनःस्थापनाका कार्यमा बढी केन्द्रित हुँदा बाढी र पहिरोको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । देशको कुनै एउटा भूभागमा विपद्ले आघात पु¥याएमा सबै तहका सरकार उद्धार र राहत वितरण सम्बन्धी कार्यका लागि जुट्छन्, जुन विपद्को सिद्धान्तको विपरित छ । उद्धार र पुनःस्थापनाका कार्य धेरैजसो सजिलै पहुँच हुने स्थानमा केन्द्रित भए । साँच्चै भन्ने हो भने सञ्चार क्षेत्रलाई आकर्षण गरी सरकारले केही गरेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि मात्र । तर यो अनुत्पादक र सुस्ती कार्य हो । विपद्ले प्रभावित गरेको समुदाय÷परिवारको ठूलो हिस्सा जस्ताको तस्तै रह्यो जसले लामो समय सम्म राहत (खाना र आश्रय) सहयोगको अपेक्षा गरिरहनु प¥यो । यद्यपि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्पष्टसँग विपद्मा कसरी संलग्न हुने भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारको भूमिका तथा जिम्मेवारी किटान गरिदिएको छ । अनुभवलाई हेर्दा अर्कै वा फरक अवस्था झल्काउँछ । तोकिएको भूमिका तथा जिम्मेवारीहरू न त सरकारले प्रचारप्रसारमा ल्यायो, न त समयमा कार्यान्वयन मै आए । लामो समयसम्म सरकारको ध्यान उद्धार र राहत वितरणमा नै केन्द्रित भयो ।
धेरै संघसंस्थाहरू जस्तै प्राक्टिकल एक्शनले जल तथा मौसमजन्य विपद्सँग सम्बन्धित रही समुदायको उत्थानशीलता बृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको छ । त्यस्तै, सरकारको चासो र प्राथमिकता विपद् पूर्वतयारी र न्यूनीकरणमा केन्द्रित गर्न धेरै प्रयासहरू भए । सरकारको नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरूको सहयोगमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रशस्त राम्रा कार्यहरू भएका छन् । र पछिल्लो चार, पाँच वर्षमा नेपालमा स्थापना गरिएको पूर्व सूचना प्रणालीको विकासमा उल्लेख्य मात्रामा परिवर्तन भएको छ, जसले पूर्व सूचनामा समुदायको विश्वास बृद्धि गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जल तथा मौसम सम्बन्धी जानकारी वा तथ्याङ्क सङ्कलन एवं विश्लेषण गरी जल प्रवाह वा सतहको बारेमा सूचनाहरू संप्रेषण गर्छ, मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना एस.एम.एस.मार्फत प्रभावित समुदाय सम्म प्रेषित गर्दछ । यस कार्यालयबाट बुलेटिन जारी हुन्छ र देशको विभिन्न स्थानको जलको मात्राको आधारमा प्रेश विज्ञप्ती समेत प्रकाशित गर्छ । बुलेटिन हरेक दिन दुई पटक र वर्षा तथा बाढीको पूर्वानुमान दिनमा तीन पटक सम्म प्रकाशन वा प्रशारण गरिएको छ । विभागले बाढी पूर्वानुमान प्रणाली स्थापना गरी जल सतहको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने र नेपालका मुख्य नदीहरूमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरेको छ । साथै, एस.एम.एस., वेबसाईट र सार्वजनिक सञ्चार माध्यम (सोसल मिडिया) मार्फत बाढी पूर्व सूचना सम्प्रेषण गरिन्छ । बाढी पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी माध्यम भएको ठहर गरिएको छ, जुन एकै समयमा समुदायमा आधारित संस्थाहरू र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको राडार प्रणालीसँग जोडिन्छ ।
पहिरो पूर्व सूचना प्रणाली अझै विकसित हुन र भरपर्दो सूचना दिन बाँकी छ । अहिले सम्म हामी वर्षाको थ्रेसोल्डलाई पहिरोसँग जोडिरहेका छौं । आगामी दिनमा प्रशस्त अनुसन्धान र विकासका प्रयासहरू पहिरो सम्बन्धी कार्यका लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
<यस लेखको अंग्रेजी संस्करण Global Flood Resilience Portal मा Explaining Nepal's deadly landslides को नाममा प्रकाशित भईसकेको छ। >
३० असोज २०७७ लेखक : कृष्ण बसौला, प्राक्टिकल एक्शन सह लेखक : लक्ष्मी अवस्थी र डा. धरमराज उपे्रती, प्राक्टिकल एक्शन पृष्ठभुमि नेपालमा हरेक वर्ष ५०० भन्दा बढी बिभित्र प्रकोपका घटनाहरू हुने ग�...
विक्रम राणा र कृति श्रेष्ठ, प्राक्टिकल एक्शन तथा सुरेन्द्र थगुन्ना, सि. एस. डि. आर. असोज, २०७७ “कसैलाई पनि पछाडी नछोडौँ” (Leaving No one Behind (LNOB)) भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति सजिलो छैन। पछाडी छुट्टिने वर्गह...
जुलाई ३१, २०२० धर्म उप्रेती र कृति श्रेष्ठ सन् २०२० मा वर्षाजन्य विपद्को प्रभाव कति? यो वर्ष मनसुनको सुरुवात जून १२, २०२० देखि भएको थियो । हरेक वर्ष सामान्यतया जून १० बाट सुरु हुने भएतापनि �...